The Somali Dir Clan's History: Codka Beesha Direed: Shirwayne maantay ay sigu yimaadeen waxgaradka Beesha Qubeys Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya
Shirwayne maantay ay sigu yimaadeen waxgaradka Beesha Qubeys Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya
Shirkaas oo ay kasoo qayb galeen culomo u diin, siyaasiyeen, cuqaal,aqoon yahano iyo wax garadka beesha. Shirkaas oo looga arin sanayey dhibaatooyinka hada kataagan somaaliya ,gaar ahaan abaaraha daba dheeraaday eek u dhiftay geeska afrika, khaasatan somaliya.
Sidoo kale waxay ka hadleen shaqaaqooyin ka dhacay deegaanka Miirjiiclay,halkaa soo
xasuuq loogu gaystay culumaa u diin kasoo jeeda Beesha Qubeys kuwaa soo isku xilsaaray in ay dhex dhexaadiyaan muran ka dhex dhacay labada beelood ee ka soo kala jeeda Mirjiiclay iyo Dhuuso mareeb, kana bilowday warbiyood ku taala deegaan kaas.
Shirkaas oo ay ka soo baxeen qodobo muhiim ah oo ay ka midyihiin sida hoos ku xusan:-
1.in wada hadal lagu dhameeyo dhibaatadii ka dhacday deegaankaas.
2.in shareecada islaamka lala tiigsado shaqsiyaad kii xasuuqa gaystay.
3.Waxay sidoo kale dhaleecayn kulul usoo jeediyeen dadkii xasuuqa u gaystay culumo u diinkii ka shaqayeynayey masaalaxada labada dhinac.
4.Waxay kaloo dhalil u soo jeediyeen waxgaradii ay ka soo jeeden shaqsiyaadkii xasuuqa gaystay ku waa soo wax jawaaba ka bixin dhibaatadii mesha ka dhacday.
Waxaa kaloo shirkaas lagu casuumay urur waynaha SOYAAL, ku wasoo iyaguna ku baqay in wax walba nabad iyo wada hadal lagu dhameeyo,sabab too ah colaad hor leh maantay umada somaaliyeed uma bahna mel kasta oo ay jogaan, 21 sano kadib oo umada soomaaliyeed ay ku dhex jireen colaad iyo burbur tasoo saamaysay dhamaan bulshada soomaaliyeed.
Short URL: http://soyaal.com/?p=959
Posted by DIRSAME at 12:15 AM
Labels: Shirwayne maantay ay sigu yimaadeen waxgaradka Beesha Qubeys Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya